JEUNES ROCKERS MAHAJANGA : Nankalaza ny faha-29 taona niorenany
Nankalazaina niaraka tamin’ny fiarahabana nahatratra ny taona ny faha 29 taona ny club de danse jeunes rockers. Ny takarivan’ny sabotsy teo no nanaovana izany teny amin’ny le bonheur Tsararano ambony. 10 février 2019
Olo-manan-kaja maro no nanatrika ny fotoana notarihin’ny lehiben’ny sampan-draharahan’ny kolotsaina ao amin’ny kaominina, ny talem-paritry ny foiben’ny kolotsaina sy ny talen’ny tranoben’ny kolotsaina. Nanotrona izany ihany koa ny consul des Comores. Klioba namolavola ny ankamaroan’ny mpampianatra dihy eto Mahajanga ankehitriny ny jeunes rockers. I Jerome na i jeune homme antsoina koa hoe Sheo no mpitarika ny klioba sady mampianatra no manabe ireo tanora hatramin’izao.
Nandritra ny lahateniny moa dia niangavy ny mba hampianarana ny dihy avy eto Mahajanga toy ny dihy sakalava, ny baoejy, salegy i jean de Dieu izay nisolo tena ny ben’ny tanàna. Ny talem-paritry ny kolotsaina kosa dia nanambara fa tsy ny dihy ihany no kolotsaina fa hatramin’ny fomba fipetraka fiakanjo sy fisakafo. Tokony hatao lohalaharana ny dihy avy eto an-toerana rehefa misy hetsika atao eto Mahajanga, hoy hatrany izy. Ny talen’ny tranoben’ny kolotsaina kosa dia niangavy ny ray aman-dreny handefa ny zanany hobeazina any amin’ny club jeunes rockers, indrindra rehefa tsy mianatra ny alarobia hariva mba tsy hirenireny. Naneho dihy isan-karazany ireo mpikambana ao amin’ny jeunes rockers izay ahitana ihany koa ny fikambanana jeunes mamans. Nahafinaritra ny fety satria dia nandefa solotena avokoa ny ankamaroan’ny klioba eto Mahajanga.